EDRCoin စျေး - အွန်လိုင်း EDRC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို EDRCoin (EDRC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ EDRCoin (EDRC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ EDRCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $38 936.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ EDRCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
EDRCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
EDRCoinEDRC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.416EDRCoinEDRC သို့ ယူရိုEUR€0.352EDRCoinEDRC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.318EDRCoinEDRC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.378EDRCoinEDRC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr3.69EDRCoinEDRC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.62EDRCoinEDRC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč9.2EDRCoinEDRC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.55EDRCoinEDRC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.55EDRCoinEDRC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.582EDRCoinEDRC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$9.23EDRCoinEDRC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$3.22EDRCoinEDRC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.23EDRCoinEDRC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹31.11EDRCoinEDRC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.70.2EDRCoinEDRC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.571EDRCoinEDRC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.636EDRCoinEDRC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿12.91EDRCoinEDRC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥2.89EDRCoinEDRC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥44.44EDRCoinEDRC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩492.97EDRCoinEDRC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦161.1EDRCoinEDRC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽30.36EDRCoinEDRC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴11.43
EDRCoinEDRC သို့ BitcoinBTC0.00004 EDRCoinEDRC သို့ EthereumETH0.00108 EDRCoinEDRC သို့ LitecoinLTC0.00765 EDRCoinEDRC သို့ DigitalCashDASH0.00458 EDRCoinEDRC သို့ MoneroXMR0.00467 EDRCoinEDRC သို့ NxtNXT32.44 EDRCoinEDRC သို့ Ethereum ClassicETC0.0613 EDRCoinEDRC သို့ DogecoinDOGE120.01 EDRCoinEDRC သို့ ZCashZEC0.00505 EDRCoinEDRC သို့ BitsharesBTS12.81 EDRCoinEDRC သို့ DigiByteDGB13.31 EDRCoinEDRC သို့ RippleXRP1.48 EDRCoinEDRC သို့ BitcoinDarkBTCD0.0143 EDRCoinEDRC သို့ PeerCoinPPC1.38 EDRCoinEDRC သို့ CraigsCoinCRAIG189.48 EDRCoinEDRC သို့ BitstakeXBS17.73 EDRCoinEDRC သို့ PayCoinXPY7.26 EDRCoinEDRC သို့ ProsperCoinPRC52.18 EDRCoinEDRC သို့ YbCoinYBC0.000223 EDRCoinEDRC သို့ DarkKushDANK133.46 EDRCoinEDRC သို့ GiveCoinGIVE900.72 EDRCoinEDRC သို့ KoboCoinKOBO94.74 EDRCoinEDRC သို့ DarkTokenDT0.383 EDRCoinEDRC သို့ CETUS CoinCETI1201.14